Monterey County Wines: Ebe Mmanya-eme bụ Ezin’ụlọ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Monterey County Wines: Ebe Mmanya-eme bụ Ezin’ụlọ
Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Kedu ihe ịmara banyere Obodo Monterey? Nke mbụ, ọ bụ na California… mgbe niile bụ ezigbo mmalite maka a mkparịta ụka banyere mmanya. Mgbe anyị gbatuuru n’ógbè ahụ, anyị na-achọpụta mma nke ụsọ mmiri jupụtara na Big Sur; osimiri na ndi nka na Kamel n’akuku Oke Osimiri; ọdọ mmiri, na golf na Pebble Beach; na akụkọ mmiri jupụtara na mmiri nke Cannery Row na Monterey Bay. Monterey County, mmanya vaịn Monterey County, abụwo ebe njem nleta na-adọta nde mmadụ 4.6 kwa afọ, na-ewepụta ijeri $ 2.8 na mmefu nke na-akwado ọrụ 25,220.
Ihe ụfọdụ na-eleghara anya na macro-ele nke County bụ na nchikota nke okpomọkụ sitere na anyanwụ, ụjọ oge ochie na mkpokọta nke usoro ọdịnala na nke ọhụụ nke ndị na-eto eto na ndị na-ese mmanya na-eji eme ya, na-eme ka mpaghara ahụ bụrụ ebe zuru oke maka ịmịcha mmanya ụwa. na ụlọ ọrụ dị na Monterey County bara uru $ 1 ijeri kwa afọ. Mpaghara Santa Lucia Highlands na ndị na-emepụta ihe na-eme ụfọdụ n'ime mmanya kacha mma na California nwere ihe karịrị ubi vaịn 359 na wineries 82 jikọtara ọnụ (mmụba nke 46 pasent kemgbe 2012). E nwere ọtụtụ ubi vaịn a kụrụ na Monterey karịa Napa (45,990), na Paso Robles (26,000 acres).
Akụkọ mmanya Monterey County bidoro site na ndị franda Franciscan sitere na ọrụ ozi Spanish nke Soledad bụ ndị kụrụ mkpụrụ vaịn mmanya karịrị afọ 200 gara aga. N'ụzọ dị mwute, mkpụrụ vaịn ndị a nwụrụ mana echiche nke ụlọ ọrụ mmanya nọgidere na-adịgide adịgide, taa, ihe karịrị ala 40,000 na-akọ mkpụrụ vaịn maka mmanya.
Ntughari ohuru di ohuru ma bido na mbido 1960 mgbe Prọfesọ AJ Winkler, onye ikike vinicultural si Mahadum California di na Davis, biputara akuko nke na-akowa ogbe grape na-eto eto site na ihu igwe. Edere Monterey County dị ka Mpaghara M na II, nke a ga-eji tụnyere mpaghara dị oke mkpa nke Napa, Sonoma, Burgundy na Bordeaux. N’ịghọta nnukwu ikike nchọcha a nwere, Wente, Mirassou, Paul Masson, J. Lohr na Chalone bidoro ubi vaịn a kụrụ n’ogo nke sitere na iri isii ruo ọtụtụ puku acres, na-eme ka ọ bụrụ otu n’ime mkpụrụ vaịn vaịn kachasị elu na-eto eto na California. Gụ akụkọ zuru ezu na WINES.TRAVEL.